Chọpụta ugo na-acha uhie uhie: njem kachasị mkpa na - ULLER
Dị ka ọtụtụ egwuregwu aerobic, ịgba ịnyịnya ígwè bụ ịdọ aka ná ntị zuru oke nke ọtụtụ akwara dị na ahụ na-arụ ọrụ, ma na-ejekwa ozi dị ka onye na-egbu mgbu na-egbu onwe ya megide mmebi mmetụta uche nke ụbụrụ anyị mepụtara, na -emepụta endorphins nke ị chọrọ iji kwụsị nrụgide. O doro anya na ọ bụrụ na ịmeela ịgba ígwè ma ọ bụ otu n'ime usoro ya n'oge ndụ gị, ị maara ihe ọ na-adị mgbe ị nọ n'ụgbọ ahụ.
Kedu ule Bearded udele?
Quebrantahuesos bụ ịgba ịnyịnya ígwè nke nwere ụzọ abụọ dị iche iche ejikọtara ọnụ: Nnukwu Ugo Bearded(200km) na Ọkara Ala Creeper Okporo (85km)
Nke mbụ, anyị ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere Nnukwu Ugo Bearded. Ọ bụ ule na ihe karịrị ndị 8000 so n'akụkụ ụwa niile na-aga kwa afọ ma a na-eme ya na Spen na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Europe. Ọ nọwo na-arụ ọrụ ruo ihe karịrị afọ iri abụọ. Ọ na-eme na Sabiñánigo (Huesca) ma bụrụ ndị Edelweiss Cycling Club na-ahazi, otu ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 1000 na nke ọ bụla n'ime ule ahụ iji dịrị ndị sonyere.
N'ime ya ka ha na-agba ọsọ 198 kilomita na ngụkọta enweghi aha nke ụzọ bụ ihe dị ka 3500 mita. Ọ gafere mkpọda French ruo mgbe ọ ruru Pyrenees. Ugwu anọ ahụ gafere Nke ndị sonyere na njem a gafere bụ: Portalet, Marie Blanque, Hoz de Jaca na Somport. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmasị na ịdọ aka ná ntị a ma jiri ịnyịnya ígwè na-eme njem dị anya, ị gaghị echefu ahụmahụ nke njem Quebrantahuesos na-enwe ọmarịcha ala ndị mara mma nke ugwu Aragonese. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nnọọ ihe ịma aka.
N'aka nke ozo, Ọkara Ala Creeper O nwere uzo nke kilomita 85 na ngụkọta dị iche na elu nke mita 1335. N'adịghị ka udele Bearded Vork, naanị njem a gụnyere ugwu abụọ gafere: elu Petralba na ọdụ ụgbọ mmiri nke Cotefablo, ebe abụọ ebe ọdịda ala nke Sierra de Aragón bụ ndị isi na-akwado.
Mụta ntakịrị ihe banyere ịgba ịnyịnya ígwè; na-eduga ịdọ aka ná ntị nke Bearded Ude
A maara na ịgba bọọlụ na-amụ obere oge emechara igwe izizi; draịsaana. Ọ pụta dị ka ọrụ mmegharị nke, na mgbakwunye, enwere ike ibufe ihe site n'otu ebe gaa ebe ọzọ.
Ka oge na-aga, mgbe ọmarịcha igwe dị elu dị elu karịa, ọ ghọrọ ihe ama ama n'etiti ọha mmadụ dị ka egwuregwu na asọmpi asọmpi jikọtara egwuregwu na njem. Taa ọ bụ otu n'ime ọrụ ịgba ịnyịnya kacha baa uru, wee bụrụ ohere dị egwu ịnụ ụtọ ọdịdị ala mgbe ị na-eme egwuregwu dị ka ụgwọ ọrụ dị ka ịgba ígwè.
Ofdị ịnyịnya ígwè a na-eji adọ aka ná ntị a nwere ike ịgbanwe. Anyị nwere ike ịchọta site n'okporo ụzọ, ngwakọ ngwakọ na igwegharịgharị na-agba ịnyịnya ígwè. Ihe niile bụ ihe gbasara ịmara ókèala a ga-ekpuchi yana mkpa onwe onye nke onye ọ bụla na-agba ịnyịnya.
Otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na mbido na-eme ịdọ aka na ntị a mgbe niile bụ onye France bụ Paul De Vivie, onye na-agba ígwè na onye nta akụkọ bụ onye dị afọ 22 mepụtara azụ azụ nke ịnyịnya ígwè (1887). Eleghị anya ọ ga-ekele ya ụzọ nke ihe karịrị 40 awa n'okporo ụzọ French nke anyị nọ ebe a taa na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè. You maraworị ozi a?
Kedu edemede ole dị na Ugo Bearded udele?
Nnukwu ego bearded Vork na-eme njem Ngalaba 12 na-aga site na leta A ka L na onye ọ bụla n’ime ha mejupụtara otu nwoke na nwanyị dịgasị afọ, ịbụ otu K bụ naanị onye na-anabata ịnyịnya ígwè nke ihe karịrị otu onye nọ na njem ahụ. Ọzọ, ọrịrị ule nwere naanị uzo abuo (X na Y) na ndi otu ndi nwanyi na ndi nwoke.
Ya mere, mgbe ị na-edebanye aha maka ụzọ abụọ nke njem, ị ga-ahọrọ ụdị nke kwekọrọ na njirimara gị.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m chọrọ ịdebanye aha maka mbipụta ọzọ nke Bearded Vulture
Vorked Vork bụ ule na-ewere ọnọdụ n'ebe ndị bara nnukwu uru maka France na Spain, n'ihi nke a, ọnụọgụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-esonye na ya machibidoro nzukọ nke njem ahụ. Na mgbakwunye na nke a, nnukwu ọchịchọ maka ngwa pụtara na naanị otu ụzọ esi agba Vorked Vork na nke ọ bụla n'ime usoro abụọ ya bụ site na ịdenye aha maka raffle.
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọsọ na Great Bardom Vork ma ọ bụ Middle Bottom Treparriscos na mbipụta na-esote, ị ga-abanye na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Bearded Udele ma soro usoro ndebanye aha. Cheta na ị ghaghi ịhọrọ naanị otu n'ime ule abụọ ahụ mgbe ị na-ekpuchi ngwa gị. Ndị mmadụ sonyere na afọ ndị gara aga na nke ọ bụla n'ime ihe omume abụọ ahụ ga-enwe uru mgbe a bịara n'ịnata ọnụ ọgụgụ ha na ndị ọhụrụ.
Ozugbo ị sonyere na raffle ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ikikere ịgba ịnyịnya ịgba akwụkwọ, ma ọ bụ wepụ mkpuchi otu ụbọchị nke nzukọ ahụ na-enye. Yabụ, ọnụ ahịa ule ahụ ga-ebili na nke abụọ a.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa iji gosipụta akwụkwọ ahụike dị mma yana otu afọ nke nkwado na ngwa gị nke gosipụtara na ị ruru eru isonye na ule abụọ ahụ na-enweghị mmachi. Ebumnuche nke usoro a bụ iji hụ na ahụike nke ndị otu ule a.
Ozugbo inwetara ụdị niile enyere gị ebe ekenye gị ọrụ, ị ga-aga bulie nọmba gị ma ihe niile ga-adị njikere ịmalite njem ahụ.
AJREJRE A NA-AJKKAR AB BANYERE EGO
1. Gini bu ego nke Gran Fondo Bearded Udele?
Isonye na raffle maka ebe njem ị ga-akwụ 4 euro na ndebanye aha. Mgbe ahụ, ozugbo inwetara ebe ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ euro 75 ma ọ bụrụ na ịnwere ikike ịgba ịnyịnya ịgba ịnyịnya ma ọ bụ euro 87 ma ọ bụrụ na ịnweghị ya ma ị ga-ewere mkpuchi maka njem ahụ site na nzukọ ahụ.
2. Gịnị bụ ọnụahịa nke Ọkara Bottom Treparriscos?
Ga-akwụ 4 euro isonye na Olee maka square. Ozugbo inwere ya, ị ga-akwụ ụgwọ euro 65 ma ọ bụrụ na ịnwere ikikere ịnyagharị ma ọ bụ euro 77 ma ọ bụrụ na ịnweghị ya ma ị ga-ewere mkpuchi na nzukọ ahụ.
3. Na awa ole ka njem nke Gran Fondo na-emecha?
Ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè na-ejikarị awa 6 mezue ya, ebe ndị ọzọ na-amakarị na-ewe ihe dị ka awa 7 na 12 iji ruo nkwụsị.
Obi abụọ adịghị ya na ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime egwuregwu ndị na-eme ka ndị na-eme ya nwee nnukwu agụụ, yana ndị na-ekiri ihe nkiri, ndị na-eche na ọ bụ ha bụ onwe ha.